मुद्रण दायराहरू सम्पादन गर्नुहोस्
संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँं मुद्रण दायरा निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईँं स्तम्भहरू र पङ्क्तिहरू पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ । जुन प्रत्येक पृष्ठमा दोहोरिने गर्दछ्छन ।
तपाईँंलाई परिभाषित मुद्रण दायरा परिमार्जन गर्नलाई अनुमति दिन्छ ।
दायाँ-हात तिरको जाँच बाकसमा तपाईँं सन्दर्भद्वारा वा नामद्वारा मुद्रण दायरा प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ । यदि कर्सर मुद्रण दायरापाठ बाकषमा छ भने तपाईँं माउसको मद्दतले स्प्रेडसिटमा मुद्रण दायरा चयन गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
प्रत्येक पृष्ठमा छाप्नलाई एक वा एक भन्दा बढी पङ्क्तिहरू रोज्नुहोस् । उचित पाठ बाकषमा पङ्क्ति सन्दर्भ प्रविष्ट गर्नुहोस्,उदाहरणका लागि "1" or $1" or "$2:$3" ।यो सूची बाकसले -परिभाषित प्रयोग कर्ता-प्रदर्शन गर्दछ । तपाईँंले परभाषित दोहोरिएको स्तम्भ हटाउन -कुनै पनि होइन-पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईँंले यदि संवादमा कर्सर पङ्क्तिहरू दोहोर्याउनेपाठ फाँटमा हुन्छ भने स्प्रेडसिटमा माउसद्वारा तानिएका दोहोरिएका पङ्क्तिहरू परिभाषा गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
प्रत्येक पृष्ठमा छपाउन एक वा धेरै स्तम्भहरू रोज्नुहोस् । उचित पाठ बाकषमा स्तम्भ सन्दर्भ प्रविष्ट गर्नुहोस् उदाहरणका लागि "A" वा "AB" वा "$C:$E". यो सूची बाकसले -प्रयोगकर्ता परिभाषित-प्रदर्शन गर्दछ । तपाईँंले परिभाषित दोहोरिएको स्तम्भ हटाउन -कुनै पनि होइन- पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।
यदि कर्सर संवादमा स्तम्भहरू दोहोरिने पाठ फाँटमा छ भने तपाईँं स्प्रेडसिटमा माउसद्वारा तान्दा दोहोरिएका स्तम्भहरू परिभाषा गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।.
Title is: मुद्रण दायराहरू सम्पादन गर्नुहोस्